Ọrụ Nkwado - Educationlọ Akwụkwọ Mmụta Asụsụ abụọ
Home Bekee maka ndị gbara ọsọ ndụ, Asylees, SIV, na ndị na-agba ọsọ ahiaỌrụ Nkwado
Dị ka onye bịara ọhụrụ na United States, ịmụ asụsụ Bekee nwere ike inyere gị aka ijikọ n'ụlọ ọhụrụ gị na obodo ọhụrụ gị. Ebumnuche anyị na BEI bụ inyere gị aka imezu Nrọ gị nke America ma merie ihe mgbochi ọ bụla site n'inye gị otu ngwaọrụ kachasị ike - nkwukọrịta. Anyị na-akụziri gị Bekee ịchọrọ maka obodo na ọrụ. Ọ bụrụ n’uche ị gụrụ akwụkwọ Bekee adịghị ka nke ezigbo ya, chee na ọrụ nkwado anyị na-enye iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Employmentchọta ọrụ nwere ike ịna-enye gị nsogbu, ọkachasị mgbe ị bụ onye ama ama n’obodo ọhụrụ. Onye Ndụmọdụ Onye Mmụta anyị nọ ebe a iji nyere gị aka ma nyere gị aka ịmecha usoro iji mezuo ụzọ ọrụ gị. Mgbe ụfọdụ, nke a pụtara ịnọgide na ndụ gị ogologo oge ebe a na US. N'oge ndị ọzọ, ọ pụtara ịchọta ebumnuche ọrụ ọhụụ. Ọrụ anyị na-ahụ maka ị nweta ọrụ nwere ike inye aka chọpụta ohere ọzụzụ, ịmalite ịmalite ide, klaasị asụsụ Bekee, klas nka ọrụ, yana ndị ọzọ!
BEI na-enye nlekọta ụmụaka n'oge klaasị, ka mama m na papa m nwee ike ịga n'ihu na-amụ asụsụ Bekee ebe a na-elekọta ụmụaka.
BEI nwere ike ịbụ onye na - eweta asụsụ gị, mana ị maara na anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta akụ ndị ọzọ n'obodo? Dịka nwata akwụkwọ na BEI, ị bụ akụkụ nke nnukwu netwọkụ nkwado. Egbula oge ịjụ anyị ajụjụ ọ bụla. Anyị nwere ike ibuga gị na ndị na-ahụ maka ndị gbara ọsọ ndụ maka enyemaka maka ọrụ, mkpa ụlọ, nkwadebe GED, wdg. Anyị amalitela ọtụtụ afọ nke netwọkụ obodo. Jide n'aka na gị na ndị na-ahụ maka mmụta nke BEI nwere ịmụtakwu.
Anyị niile bụ ndị na - amụ asụsụ na anyị maara etu o si adị mmalite. N'oge ọ dị mkpa, ndị ọrụ anyị dị iche iche na ngalaba anyị nwere ike inyere gị aka n'asụsụ ala gị. Anyị nwere nkwado asụsụ n’asụsụ Arabic, Chinese, Farsi, French, Hindi, German, Gujarati, Japanese, Kazakh, Kinyarwanda, Kirundi, Korean, Kurdish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbo-Croatian, Pashto, Spanish, Swahili, Tagalog. , Turkish, Urdu, Vietnamese, na Yoruba.
Mgbe ị kwagara n’obodo ọhụrụ, mgbe ụfọdụ ọ na-ewe obere oge iji mụta okporo ụzọ ma nweta ntụsara ahụ. Maka nke a, anyị na-enye ọtụtụ klas anyị nso n'ụlọ gị, na ọnọdụ dị mfe ịga. Ọ bụrụ n’inwere ntụsara ahụ njem ọha, ịnwere ike ịnwere klas na kọleji anyị. Enwere ike ịgba bọs bọs maka ụmụ akwụkwọ bịakwute BEI, dịka achọrọ.
Itinye akwụkwọ maka Citizensbụ Amaala US?
BEI na-enyere aka zigara ndị ahịa ruru eru maka usoro mmụta maka ụmụ amaala nke US site na CCT Houston.
Klaasị bụ maka ndị na - amụ Bekee ma lekwasị anya n'ịkwadebe ụmụ akwụkwọ maka ajụjụ ọnụ Naturalization, Bekee na US Civics / History exam. Mụta ajụjụ ọnụ ahụ, ule ahụ, ma mụta Bekee dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma. Ndi emezuru emezuru emecha nweta ohere enyemaka na nnọchite anya nke omume ha nke ndi Katolik.
Rịọ nkọwa ndị ọzọ gbasara Njikere Mbido Citizensmụ Ama Ama
Afọ anyị aka!
Ulo nke Mmuta Asusu Bekee bu ezigbo uwa zuru oke ma nwee ohere iji soro obodo di iche di iche ma obu soro ndi ohuru na-ezi ihe. Ma ị nwere mmasị ịkụzi ihe n’ụlọ ma ọ bụ njem na mba ofesi, BEI nwere ike inyere gị aka na ọzụzụ a chọrọ iji bụrụ onye nkuzi asụsụ Bekee ọkachamara.
Ezubere Onye Nkuzi Onuzi Onye nkuzi ka enyere ndi choro ibu ezigbo ndi nkuzi asusu Bekee aka site na ịnye:
Ndụmọdụ na usoro ndị dị mkpa maka nkuzi Asụsụ Bekee dị irè.
Kụzi usoro iji tinye ụmụ akwụkwọ nọ n'afọ ndụ niile na ọkwa niile.
Nlekọta klas na usoro nkuzi maka ọmụmụ dị iche iche.
Omume kachasị ọhụrụ na EL Trends, Mmụta agwakọta, na atụmatụ izu ụka.
Ahụmahụ ọrụ bara uru maka ndị nkuzi EL ọhụrụ nwere mmasị n'ịkụzi n'ụlọ na ná mba ọzọ.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-atụle ọrụ dị na agụmakwụkwọ Asụsụ Bekee, ịkwesịrị mezue ọrụ gị, ma ọ bụ na ịchọrọ ịga njem ma rụọ ọrụ n'ofe ụwa, kpọtụrụ BEI iji malite ọrụ EL gị.
Ọrụ Onwe Onye Taa!